कुनै आश्चर्य छ कि उनी भन्छन् कि प्रेम प्रेम खराब छ, किनकी कुनै महिला यस तथ्यबाट प्रतिरक्षा छ कि एक दिन उनीहरुसँग पहिले नै एक पति वा पत्नी छ कि चासो छैन। यदि तपाईं यस्तै स्थितिमा हुनुहुन्छ भने, तपाइँसँग मात्र2तरिकाहरू छन्, वा तपाईंको जुनूनको वस्तु बिर्सने प्रयास गर्नुहोस्, वा विवाहित मानिस कसरी लिने सल्लाह सल्लाह लिनुहोस्।
परिवारबाट विवाहित पुरुष कसरी लिने?
स्थितिको आकलन। यदि तपाईं कार्य गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ भने, त्यसोभए पहिलो कुरा भनेको तपाईं कसरी माया गर्नुहुन्छ मानिसलाई कस्तो लाग्छ। तपाईंले पहिले नै अप्रत्यक्ष चिन्हहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ, ध्यान दिनुहोस् कि कसैले मानिसलाई चासो आँखाको साथ हेर्छ कि चाहे तपाईंसँग कुराकानी गर्न सजिलो छ, वा यसको विपरीत, उसले तपाईंलाई जोगाउँछ। वास्तवमा, यदि सम्भव भएमा स्थिति निर्धारण गर्न प्रयास गर्नुहोस्, नजिकको मित्रलाई सोध्नुहोस् जुन जुनसुकै जुनसुकै कुरा हो जुन जुनसुकै कुरा हो जुन जुन जुन तपाईले जुनसुकै हो जुन जुनसुकै कुरा हो। यस दृष्टिकोणले अझ राम्ररी बुझ्न मद्दत गर्दछ कि कसरी मानिसले तपाईंलाई व्यवहार गर्दछ। प्राप्त जानकारीको आधारमा, तपाईंको छविमा केही परिवर्तनहरू बनाउनुहोस्, उदाहरणको लागि, स्टाइलिस्टमा जानुहोस् वा कपडाहरू कि तपाईंको दिमाग उत्प्रेरित गर्नेछ।
असफलता खोज्नुहोस्। अर्को, तपाईं आफ्नो प्रेमीको परिवारको बारेमा एकदम बढी जान्नुपर्छ, ज्ञात रूपमा, कुनै विवाह सही छ, र कुनै पतिले सबै कुरामा पतिको व्यवस्था गर्न सक्दैन। तपाईले विवाहित जीवनको कुन पक्षहरू बुझ्न आवश्यक छ जुन मानिसलाई मनपर्छ, त्यो परिवर्तन गर्न चाहन्छु। यस्तो जानकारी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, यसले तपाईंलाई मद्दत गर्नेछ, कसरी प्रेमीलाई आकर्षित गर्न, र एक विवाहित मान्छे टाढा। तपाईंले खातामा एक व्यक्तिको सबै असमानता लिनु पर्दछ र परिवर्तन गर्नुहोस् ताकि उनीहरूको आँखामा आदर्श बन्न सक्दछ। पत्नी क्यारियरसँग व्यस्त छ र पकाउने मनपर्दैन? राम्रो! यसको विपरीत खेल्नु, एक घर पाई संग एक मान्छे को उपचार। पत्नी कुकुरहरू मन पराउँदैनन्, र एक जना मानिसलाई भेडाको साथ प्रसन्न मन पर्छ। उल्लेखनीय छ, उसलाई घर मा एक कुत्ता चाहनुहुन्छ, जनावरको सामग्री मा परामर्श, प्रशिक्षण को विशेषताहरु को बारे मा कुरा गर्न चाहनुहुन्छ। चाँडो वा पछि प्रेमीले तपाईंलाई र उनको पत्नीको तुलना गर्न सुरु गर्नेछ, र परिणाम तपाईंको पक्षमा हुनेछ।
सञ्जाल लुकाउँदै। अब सबैभन्दा कठिन कुरा बनी रहेको छ, एक मान्छे को नजिकको व्यक्ति बन्न, बिना यो एक विवाहित पुरुषको नेतृत्व गर्न कसरी असम्भव हुनेछ र सम्बन्ध राख्नुहोस्। सुन्नुहोस् र आफ्नो प्रेमीलाई समर्थन गर्नुहोस्, उनीहरूको स्वतन्त्रता सीमित नगर्नु र प्रशंसामा परम्परा नगर्नुहोस्। यदि एक व्यक्ति देख्नुहुनेछ कि तपाईंले आफ्नो विचार साझा गर्नुहुन्छ, उसले तपाईंलाई भरोसा गर्न सुरु गर्नेछ, र यो सम्बन्धको आधार हो।
अर्को पतिलाई कसरी लिने?
सम्बन्धमा पुरुषहरूको मनोविज्ञान
शेरोन स्टोन जेम्स फ्रान्कोको लागि उभियो, यौन उत्पीडनको आरोप लगाइयो
प्यान्ट्रेटिक प्यान्रेटाइटिस - नमूना मेनू को लागि आहार
सैम स्मिथ र ओस्कर 2016
बच्चाहरु मा साइनसाइटिस - लक्षण
स्नोबोर्डिङको लागि जैकेट
गर्भवती किर्स्टन डन्स्ट र एवा फिलिप ब्रान्ड रोडार्टको लागि रंगीन फोटो शूटमा अभिनय गरे
मिनिसिङ मासुबल - हर स्वादको लागि additives संग विभिन्न मासुबाट हार्दिक गर्मीको व्यंजनहरू!
कलेजगार्ट कसरी गर्ने?
जेनिफर एनिस्टन र जस्टिन थोरक्सले तलाकले पाउँदैनन्
स्तनपानको समयमा जल तरबूज र तरकारी
टच स्क्रीनको साथ ल्याप्टप
बच्चाले डीपीटी पछि एक पैदल छ
बच्चालाई कसरी आमाबाबुसँग सुत्न को लागी - सरल तरिकाहरू
Plitvice Lakes, क्रोएशिया
हानिकारक हृदय दर